Tuesday, 31 July 2018 4:32 PM [ Last Update: Tuesday, 31 July 2018 4:35 PM ]
Zimbabwe Electoral Commission officials (ZEC) distribute postal votes for Bulawayo's different constituencies at ZEC offices on July 28, 2018. (Photo by AFP)
Some local results from parallel parliamentary elections have been declared but the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) has yet to produce any figures from Monday's presidential vote.
"There is a deliberate delay in formally announcing results," Biti told a news conference, characterizing it as "interference with the people's will."
ZEC said there was no rigging or cheating in the vote, whose credibility is vital in Zimbabwe's attempts to emerge from the pariah status and economic decay into which it sank in the latter half of Mugabe's nearly four decades in charge.
The poll is a two-horse race between 75-year-old Mnangagwa, a long-serving security chief who took over after Mugabe's removal, and 40-year-old MDC leader Nelson Chamisa.
Zimbabwe opposition election
US must stand trial at intl. courts for systematic racism: Iran 25min
Hong Kong leader slams ‘double standards’ on national security, cites US unrest 33min
Zimbabwe: Voters head to polls for first post-Mugabe elections
Zimbabwe to hold general elections on Monday
Zimbabweans picking president in 1st post-Mugabe vote